﻿﻿ Puntland State of Somalia – Kulan looga hadlayey dardargelinta mashruuca CIP iyo shaqaalaha cusub ee dawladdu qaadanayso oo Garoowe lagu qabtay
Agaasimihii hore ee Madaxtooyada dawladda Puntland Deeq Saleebaan Yuusuf oo kulanka hadal ka jeediyey ayaa ku dheeraaday marxaladihii uu mashruucaani soo maray isagoona xusay in Puntland ay tahay meesha keliya ee Mashruucaani uu si rasmi ah uga hirgalay,
Agaasimaha Cusub ee Madaxtooyada Cabdinaasir Biixi Soofe oo isaguna hadal ka jeediyey shirka ayaa xusay in mashruuca ay ka faa’iidaysanayaan 9xarumood isla markaana uu rajeynayo muddada uu joogo in mashruucaan ay ka faa’iideysan doonaan dhammaan xarumaha dalwadda.
Mr Alex oo ah madax mashruuca CIP ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay sida wanaagsan ee ay Puntland uga faa’iideysatey mashruuca isla markaana uu halkaan u yimi sidii ugu kuurgeli lahaa habsamid u socodka mashruuca, dawladdana uu uga dhegeysan lahaa talooyinkeeda la xiriira dardargelinta mashruuca.
Wasiirka Shaqada, shaqaalaha, dhallinyarada iyo Ciyaar Cabdiraxmaan Sheekh oo kulanka furay ayaa sheegay in ay dawladdu si mugle uga faa’iideysatey mashruuca, isla markaana ay uga mahadcelinayaan bangiga adduunka taageeradooda iyo garab istaagoodaba.
Sidoo kale Wasiirku waxa uu sheegay in ay dawladda ka go’antahay ka dhabaynta dib u habaynta shaqaalaha iyo dib u habaynta qaab dhismeedka Wasaaradaha si looga mirodhaliyo yoolka la tiigsanayo ee dib u habaynta shaqaalaha.
Wasaaradda qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah oo ugu horrayn uu kulanku ka furmay ayaa waxa si gaar ah loo lafa-guray muddadii uu kulanku socdey waaxyaha dabogalka iyo qiimaynta iyo waaxda istaatiitikisk (Statistics) oo ah waaxyo muhim ah isla markaana uu bangiga adduunku si-gaar ah uga taageero wasaaradda.
Sidoo kale Wasaaradda Shaqada, Shaqaalaha, Dhallinyarada iyo Ciyaaraha oo iyaduna kamid ah wasaaradaha laf-dhabarta u ah mashruuca ayaa soo bandhigtay horumarada laga gaarey dhinaca tayaynta shaqaalaha dawladda muddadii uu mashruucu socdey, waxay sidoo kale wasaaraddu ka warbixisay horumarrada laga gaadhey dib u habaynta iyo wax ka-beddelka qaab-dhismeedka Wasaaradaha (re-structured) oo lagu sameeyey qaybo ka mid ah wasaaradaha.
Ugu dambayn Wasaaradaha kalluumaysiga, Beeraha iyo Bangiga dawladda ayaa soo bandhigay boosaska ama jagooyinka ka bannaan kuwaas oo ay doonayaan in ay dhowaan shaaciyaan si tartan furan loogu galo iyadoo dad lagu kala xulanayo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda.
Markii kulanku soo dhammaaday ayaa Madaxa mashruuca CIP ee Soomaaliya iyo Xubnaha hagayaasha Mashruuca ee Puntland ee PCU waxay kormeer kusoo sameeyeen Jaamacadda PSU oo dawladda u qaabilsan dhinaca tababarka shaqaalaha iyagoon halkaasi kulan kula qaatay Maamulka Jaamacadda iyagoona ka xog waraystay halka ay marayaan arrimaha la xiriira tababarka shaqaalaha.
Kulamadaan looga arrinsanayo dardargelinta Mashruuca Ayaa sii socon doona labada maalmood ee soo socda iyadoona ugu dambayn laga soo saari doono siyaasado cusub oo lagu hagi doono dardargelinta mashruuca iyo habka shaqo qorista dawladda.